प्रदेश-२ का मन्त्री सोनल भन्छन्: योगी आदित्यनाथ हाम्रा नाति, ‘ननिहाल’ ले उनको भव्य स्वागत गर्छ - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता प्रदेश-२ का मन्त्री सोनल भन्छन्: योगी आदित्यनाथ हाम्रा नाति, ‘ननिहाल’ ले उनको...
प्रदेश-२ का मन्त्री सोनल भन्छन्: योगी आदित्यनाथ हाम्रा नाति, ‘ननिहाल’ ले उनको भव्य स्वागत गर्छ
विवाह पञ्चमी (२६ मंसीर) का दिन उत्तर प्रदेश (भारत) का मुख्यमन्त्री जनकपुरधाम आउने भएपछि त्यस विषयले प्रदेश–२ र जनकपुरको मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीति नै विस्तारै तातिन पुगेको छ । नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थापनाको पक्षपोषण गर्दै आएका आदित्यनाथको आगमनलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरुले त्यति सकरात्मक रुपमा लिन सकेका छैनन् । कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले आदित्यनाथलाई निम्तो दिने कुराको विरोध गरेपछि त झन् यो विषय राष्ट्रिय र प्रादेशिक राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ। उनको आगमनको समर्थन, विरोधको पारो तातेको छ । योगी आदित्यनाथको जनकपुर आगमनको प्रयोजन र त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्गबारे राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जीतेन्द्र सोनलसँग कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ, मन्त्री सोनलसँगको कुराकानी:
योगी आदित्यनाथ जनकपुर आउने विषय विवादमा परिसक्यो। उनलाई ल्याउने योजनामा अझै हुनुहुन्छ?
सयौँ बर्षदेखि विवाह पञ्चमीका अवसरमा अयोध्याबाट जनकपुरमा जन्ती आउने प्रचलन छ। त्यसमा हजारौँ साधु सन्त आउँछन्। उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपनि योगीजी पनि साधु हो। उहाँले आउने ईच्छा गर्नुभयो। यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने के छ र?
तर, पनि योगी आदित्यनाथ ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। उहाँको आगमनभित्र राजनीतिक उद्देश्य छैन होला र?
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। कसैलाई मन परेपनि, नपरेपनि यो कुरा नेपालको संविधानमा लेखिसकिएको छ।
अहिले उत्तर प्रदेशमा उहाँ (योगी आदित्यनाथ) मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको साटो अरु कोही व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएको भएपनि आउनुहुन्थ्यो। हामीले त अयोध्याबाट जन्ती आउने प्रचलनलाई अझ भव्यरुपमा निरन्तरता दिन खोजेका हौँ।
मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आफै आउन चाहेका हुन् वा तपाईंहरुको निम्तो हो?
बर्षाैँदेखि प्रचलनमा उहाँपनि सहभागी हुन खोज्नुभयो। म पनि आउँछु भन्नुभयो। हामीले पनि ‘आउनु हुन्छ’ भने राम्रै हुन्छ भन्यौँ। किनभने, नेपाल त उहाँको ‘ननिहाल’ (मावली हजुरबुबाको) घर हो।
कसरी मावली हजुरबुबाको घर हो?
उहाँहरु रामजी तर्फका। हामी राजा जनकतर्फका। अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामसँग जनकपुरधामका राजा जनककी छोरी सीताको विहे भयो।
यस हिसावले उहाँहरु जनकपुरको नाति पर्नुहुन्छ, भान्जा भन्दापनि हुन्छ। जनकपुत्री सीतालाई जनकपुरमा ‘किशोरीजी’ को नामले पुकारिनुहुन्छ। योगी आदित्यनाथसहितका साधुसन्तहरुले रामजीसँग ‘किशोरीजी’ (सीता) र रामको विहे कसरी भएको थियो, त्यो हेर्नुहुन्छ। ‘किशोरीजी’ को दर्शनपनि गर्नुहुन्छ।
मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ कति समय जनकपुरमा रहने कार्यक्रम छ?
उहाँ विहान ९-१० को बीचमा आइपुग्नुहुन्छ। दिनभरि बस्नुहुन्छ। र, बेलुकीपख फर्कनुहुन्छ।
आदित्यनाथको जनकपुर आगमनको शीर्ष कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले विरोध गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनु भएको छ?
तपाईंहरुले उहाँको अध्ययन गर्नुभयो भने पछिल्लो समय उहाँमा हरेक कुराको विरोध गर्ने प्रबृति बढ्दै गएको पाउनु हुन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धेरै पहिले जनकपुर आउनुहुुन्थ्यो। तर, उहाँले नै प्रोटोकल लगायतका कुरा उठाएर मोदीजी नआउने परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो। पछि बडो दुख र मिहिनेतका साथ हामीले उहाँलाई जनकपुर ल्यायौँ। मोदीजी आएपछि जनकपुरको निकै ठूलो प्रचार भयो, जनकपुरले विश्वव्यापी प्रचार पायो। अहिले फेरि मुख्यमन्त्री आउन नदिने वातावरण तयार गर्दै हुनुहुन्छ।
किन होला त उहाँले यस्तो गर्नुभएको?
नेपाली कांग्रेस अहिले सबैतिर प्रतिपक्षमा छ, तलदेखि माथिसम्मै। सायद हरेक कुराको विरोध गरेर उहाँले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नुभएको होला। सभार नेपालखबरबाट
Previous articleसरकार, मिडियाले मलाई गुण्डाजस्तो बनाए: पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियार
Next articleसामाजिक सञ्जालमा भाइरल नभएको मधेस – कञ्चन झा